Salama ry Cabal tia, te-hahazo ny fialam-boly rehetra an'i Cabal amin'ny Smartphone ve ianao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ity fampiharana Android farany ity, izay fantatra amin'ny anarana hoe CABAL MOBILE. Manolotra traikefa amin'ny lalao mitovy ihany izy io fa amin'ny fitaovana Android izao.
Araka ny fantatrao dia Cabal dia rindrambaiko filokana an-tserasera, izay ahafahan'ny mpilalao samihafa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao manao vady sy mandray ireo biby goavambe. Manolotra ny lalao multiplayer tsara indrindra izy, miaraka amin'ireo sary tsara indrindra. Namboarina ho an'ny mpampiasa PC ihany izy io, saingy noho ny fitomboan'ny gamer Android.
Nanomboka nanome traikefa amin'ny lalao mitovy amin'ireo mpankafy ny lalao ihany koa ireo mpamorona. Izy io dia iray amin'ireo tolotra tsara indrindra ho an'ny mpampiasa Android satria fantaro fa afaka milalao ity lalao ity amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza. Izy io dia manolotra ny sasany amin'ireo traikefa gaming tsara indrindra ho an'ny mpampiasa, izay azon'izy ireo ankafiziny milalao azy.
Misy fomba samihafa ao amin'ity lalao ity, izay azonao atao ny mifantina sy milalao. Hizara ny momba ny kinova Android daholo izahay. Noho izany, raha te hahalala bebe kokoa momba izany ianao dia tokony hijanona mandritra ny fotoana fohy miaraka aminay ary hizaha ity fampiharana ity miaraka aminay. Raha manana fangatahana momba an'ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Topimaso momba ny CABAL MOBILE Apk
Fampiharana filalaovana Android izy io, izay novolavolain'ny ESTgames Corp. Izy io dia lalao asongadina maromaro, izay manolotra kilalao an-tsehatra sy hetsika. Noho izany ny mpampiasa dia hanana traikefa mahagaga momba izany. Misy mahery fo na tarehin-tsoratra manintona samihafa azo alaina.
Ny mpampiasa dia afaka misafidy ny toetra rehetra ary afaka manova azy ireo ihany koa. Izy io dia manolotra ny hanova ny ampahany sy loko tsirairay amin'ny vatana. Azonao atao koa ny manenina ny lokon'ny hoditra. Manolotra fanangonana fanamboarana tsara indrindra izy io, izay ahafahanao manao ny avatar ho mahasarika kokoa.
Misy fomba hafa tsy misy ao amin'ity lalao ity. Noho izany, andao hiresaka ny maodely filalaovana andraikitra. Amin'ity fomba ity dia mila mamita asa samihafa ianao amin'ny famonoana ireo biby goavambe. Amin'ny dingana voalohany dia hiatrika biby goavam-be ianao, izay mora ny mamono sy manome teboka.
Misy monsters maromaro ao anaty dingana iray. Tsy maintsy mamono ny biby goavam-be ianao mba hamitana ny lalao rehetra, fa ny famonoana ny hafa dia hampitombo isa. Afaka manokatra fahaiza-manao samihafa ianao amin'ny fanatanterahana dingana samihafa. Manolotra ady sabatra isan-karazany, hazakazaka haingana, ary fahaiza-manao hafa, izay azonao ampitomboina.
The Lalao 3D manolotra fomba Multiplayer ihany koa, izay ahafahanao milalao miaraka amin'ireo mpilalao an-tserasera hafa. Azonao atao ny mampifanaraka azy ireo mba haka mpilalao hafa. Misy iraka samihafa, izay azonao atao miaraka amin'ny namana. Azonao atao mihitsy aza ny manokatra hoditra ho an'ny maherifonao.
Misy endri-javatra marobe amin'ity fampiharana ity azonao idirana. Noho izany, alaivo ity fampiharana ity ary manomboka milalao lalao mahafinaritra. Raha mbola manana fanontaniana momba izany ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
anarana MOBILE CABAL
Size 92.35 MB
Anaran'ny fonosana com.estgames.cm.th
Hanome ny traikefa lalao tsara indrindra ho an'ny mpampiasa izy io. Ny sasany amin'ireo fiasa lehibe voalaza ao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy misy maro hafa azonao zahana ao. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra etsy ambany.
Ady amin'ny tantara
Traikefa filokana amin'ny fotoana tena izy
Eto izahay dia manana lalao 3D mitovy aminao.
Orinasa mahery fo
Izahay dia hizara rohy aminareo rehetra, izay ahafahanareo misintona an'ity rindranasa ity. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo amin'ny ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy. Hanomboka ho azy ny fisintomana.
Betsaka ny lazan'i Thailand, noho izany tsy ho ela ny mpamorona dia handefa ny cabal mobile Thailand Apk. Io no fampiharana kilalao tsara indrindra ho an'ny mpilalao hiaina zava-baovao. Noho izany, sintomy ity lalao ity ary vonjeo izao tontolo izao amin'ny biby goavambe. Raha mila fampiharana mahavariana misimisy kokoa dia tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Games, Role Playing Tags Lalao 3D, MOBILE CABAL, CABAL MOBILE Apk, Cabal Mobile Thailand Apk Post Fikarohana
Bigxie Pro Apk Download ho an'ny Android [2022 Movie App]